Ukukhangisa Kokuziphatha Kuqhathaniswa Nokukhangisa Kwengqikithi: Uyini Umehluko? | Martech Zone
Ukukhangisa kwedijithali ngezinye izikhathi kuthola i-rap embi ngezindleko ezihilelekile, kodwa akunakuphikwa ukuthi, uma kwenziwa kahle, kungaletha imiphumela enamandla.
Into ukuthi ukukhangisa kwedijithali kwenza ukufinyelela okubanzi kakhulu kunanoma yiluphi uhlobo lokumaketha kwe-organic, yingakho abakhangisi bezimisele kakhulu ukuchitha kukho. Impumelelo yezikhangiso zedijithali, ngokwemvelo, incike ekutheni zihambisana kanjani nezidingo kanye nezinto ezifunwa yizithameli eziqondiwe.
Abakhangisi ngokuvamile bathembela ezinhlotsheni ezimbili zokukhangisa ukuze bafeze lokhu - ukukhangisa kokuqukethwe kanye nokukhangisa kokuziphatha.
Incazelo Engemuva Kokukhangisa Kokuziphatha Nokuqukethwe
Ukukhangisa kokuziphatha kubandakanya ukwethula izikhangiso kubasebenzisi ngokusekelwe olwazini mayelana nokuziphatha kwabo kokuphequlula kwangaphambilini. Lokhu kwenzeka ngokusebenzisa idatha eqoqwe kumapharamitha njengesikhathi esichithwe kuwebhusayithi, inombolo yokuchofoza okwenziwe, ukuthi isayithi livakashelwe nini, njalo njalo.
Le datha ibe isisetshenziselwa ukwakha abasebenzisi abambalwa abanezibaluli ezihlukile lapho izikhangiso ezifanele zingaqondiswa khona. Isibonelo, uma uxhumanisa imikhiqizo engu-A no-B, izethameli zakho eziqondiswe ku-A cishe zizozibandakanya no-B.
Ngokolunye uhlangothi, ukukhangisa okuqukethwe kuhlanganisa ukubeka izikhangiso emakhasini ngokusekelwe kokuqukethwe kulawo makhasi. Kwenzeka ngokusebenzisa inqubo eyaziwa ngokuthi ukukhomba komongo, okuhlanganisa ukuhlukanisa izikhangiso ezisekelwe ezihlokweni ezifanele noma amagama angukhiye.
Isibonelo, ikhasi lewebhu elikhuluma ngezincwadi lingase libe nesikhangiso sezibuko zokufunda. Noma iwebhusayithi eshicilela amavidiyo wokujima kwamahhala, izinqubo, nezindlela zokupheka ingadlala izikhangiso ze-cookware eceleni kokujima kwayo - kanjani I-Fitness Blender uyakwenza.
Kusebenza Kanjani Ukukhangisa Kokuqukethwe?
Abakhangisi bokuqukethwe basebenzisa inkundla yesidingo ukuze babeke izikhangiso zabo emakhasini afanelekile.
Ukusetha amapharamitha kuyisinyathelo sokuqala. Nakuba izihloko ziyizigaba ezijwayelekile isikhangiso esingangena kuzo (njengemfashini, ipolitiki, ukupheka, noma ukufaneleka), amagama angukhiye anika amandla ukukhomba okunembe ngaphakathi kwalezo zihloko. Ezikhangisweni eziningi, ukukhetha isihloko esithile kanye namagama angukhiye angu-5-50 aleso sihloko kufanele kwanele.
Bese, i-Google (noma iyiphi injini yokusesha esetshenziswayo) izohlaziya amakhasi kunethiwekhi yayo ukuze ihambisane nesikhangiso nokuqukethwe okuhlobene kakhulu. Ngokungeziwe kumagama angukhiye umkhangisi awakhethile, injini yokusesha izocabangela izinto ezifana nolimi, umbhalo, ukwakheka kwekhasi, kanye nesakhiwo sesixhumanisi.
Kuya ngokuthi umkhangisi ufuna ukufinyeleleka kucace kangakanani, injini yokusesha ingase icabangele kuphela amakhasi afana namagama angukhiye anikeziwe. Uma ukuhlaziya sekuqediwe, isikhangiso sizobekwa ekhasini lenjini yokusesha elithathwa njengelifanele kakhulu.
Kusebenza Kanjani Ukukhangisa Kokuziphatha?
Njengoba ukukhangisa kokuziphatha kuncike ekuziphatheni kwangaphambilini kwabasebenzisi, into yokuqala abakhangisi okudingeka bayenze ukulandelela lokho kuziphatha. Lokhu bakwenza ngamakhukhi, abawafaka kusigcinalwazi somsebenzisi noma nini lapho othile evakashela iwebhusayithi yomkhiqizo (futhi engena ekwamukeleni amakhukhi).
Amakhukhi abasiza ukuthi babone lapho umsebenzisi ephequlula khona, ukuthi yimiphi imiphumela yosesho achofoza kuyo, ukuthi uvakashela iwebhusayithi yomkhiqizo kangaki, yimiphi imikhiqizo afaka kuhlu lwezifiso noma abengezayo ekalishini, njalo njalo.
Ngenxa yalokho, bangakhomba abasebenzisi ngezikhangiso ezihambisana nokuthi bakwiwebhusayithi okokuqala ngqa noma baphinda abathengi. Abakhangisi baphinde basebenzise amakhukhi ukulandelela i-geolocation kanye nemingcele yekheli le-IP ukuze baqondise abasebenzisi abanezikhangiso ezifanele endaweni.
Njengomphumela wokulandelela ukuziphatha, abasebenzisi bangase babone izikhangiso zomkhiqizo abawuphequlule ngesonto eledlule lapho befunda izindaba ku-inthanethi noma bephequlula okuthile okuhluke ngokuphelele. Okusele kwentshisekelo yabo yangaphambilini noma iphromoshini ehambisana nasendaweni iyona ebakhuthaza ukuthi bachofoze.
Amathuluzi amaningana ayatholakala ukusiza amabhizinisi alandele ukuziphatha kwabasebenzisi futhi abaqondise ngezikhangiso ngendlela efanele.
Yikuphi Okungcono: Okungokokuqukethwe noma Okuziphatha?
Kulula ukudida izinhlobo ezimbili zokukhangisa, njengoba zombili zibonisa izikhangiso ezisuselwe kokuthakaselayo umsebenzisi. Nokho, zihluke kakhulu. Nakuba ukukhangisa kokuqukethwe kusebenza ngokusekelwe endaweni umsebenzisi ayipheqululayo - imvelo yokuqukethwe kwewebhusayithi, ngamanye amazwi - ukukhangisa kokuziphatha kuncike ezenzweni ezithathwe umsebenzisi ngaphambi kokufinyelela kuwebhusayithi, njengekhasi lomkhiqizo alivakashele.
Abaningi babheka ukukhangisa kokuziphatha njengokusebenziseka kakhulu kwakho kokubili, njengoba kunika amandla ukwenza kube ngokwakho okujulile ngokuqondisa abasebenzisi ngokusekelwe ekuziphatheni kwabo kwangempela kunokuba bamane bakhanyise okuqukethwe okuhlobene newebhusayithi. Nokho, kukhona izinzuzo eziningana esiyingqayizivele ukukhangisa okuqukethwe okufanele sikuqaphele.
Ukusebenziseka Kalula - Inzuzo enkulu yokukhangisa kokuziphatha ileleveli yokwenza kube ngokwakho ekunikezayo. Nokho, lokhu kudinga idatha yekhasimende eningi kanye namathuluzi afanele okuhlaziya yona, okungenzeka ingakwazi ukuthengeka kumabhizinisi anezinsiza ezimbalwa. Ukukhangisa kokuqukethwe kulula kakhulu futhi kubiza kancane ukuqalisa futhi kunikeza ukuhambisana okwanele ukuze kube indlela enhle kakhulu yokuheha abavakashi besayithi. Sesikushilo lokho, izinkampani zithembele kakhulu kumakhukhi ezinkampani zangaphandle ukuze zinikeze umuzwa wesikhangiso owenziwe ngezifiso kubavakashi bewebhusayithi. Kodwa-ke, ngemithetho ekhulisiwe kudatha (GDPR) engaqoqwa futhi isetshenziswe kubasebenzisi, izinkampani zizodinga amathuluzi athuthuke kakhulu nesofthiwe yokuphatha imikhankaso yazo yokukhangisa okuhambisana nezimo njengoba kunesinyathelo esisodwa esihilelekile, okungukuthi, ukucela imvume ku- umsebenzisi ukuqoqa idatha yakhe. Ngakho-ke, uma ufuna ukukhuthaza ukutholwa kwedijithali okusheshayo kanye nezinga eliphezulu lokuqonda mayelana nezinguquko ezintsha ekukhangiseni ethimbeni lakho lokumaketha, ezimweni ezinjalo, izindlela zokusebenzisana zingahlanganiswa nesofthiwe yesikhangiso sakho njengendlela yokuziqeqesha.
Isibonelo, ungakha i-walkthrough ukuze ukhuthaze izikhumbuzi zabakhangisi bakho abahlela umkhankaso wesikhangiso e-EU. Ungakhipha uhlu lokuhlola noma imojula yokufunda encane ukuze unikeze ulwazi olungangosayizi wokuluma ukuze luhlanganise zonke izisekelo ngenkathi usetha umkhankaso futhi ulandele yonke imithetho ngendlela efanele. Lokho kusiletha ephuzwini lesibili.
Inqubomgomo - Izinhlawulo zokusebenzisa kabi imininingwane yabasebenzisi bangasese zingaba zikhulu. Ngaphezu kwalokho, amakhukhi awasazenzakaleli kuwebhusayithi, futhi abasebenzisi badinga ukungena ngokuzithandela kuwo, okwenza ukuphinda kuthage kube nzima kakhulu. Uyabona, abasebenzisi bafuna ubumfihlo obukhulu, okuhlanganisa ukukhetha, ukubeka izinto ngale, nokulawula indlela idatha yabo esetshenziswa ngayo. Ngokwemvelo, i-ecosystem yewebhu kufanele ihambisane nezidingo zabo ezikhulayo. Nakuba i-Safari ne-Firefox sezivele ziyiyekile ikhukhi lenkampani yangaphandle, i-Google izokwenza kanjalo eminyakeni emibili. Kodwa njengoba ukukhangisa kokuqukethwe akuncikile kumakhukhi, abakhangisi bakho akudingeki bakhathazeke ngokuthi abahambisani nemithetho lapho beveza izikhangiso zabo.
Ukuvikelwa Kwesithunzi Somkhiqizo - Ingxenye eyodwa yokuphepha ngokungangabazeki ukuthobela umthetho. Kodwa-ke, isithunzi singaba yinto enzima kakhulu ukusivikela, ikakhulukazi njengoba abakhangisi bengakwazi ukulawula ukuthi izikhangiso zabo zivela kuphi. Ngokuvamile, amabhrendi abhekane nokuhlehla ngenxa yokuthi izikhangiso zawo zavezwa kumasayithi abantu abadala noma lawo anombono oweqisayo. Lokhu, nokho, bekungumphumela wokuziphatha kwabasebenzisi. Ngokuphambene, ukukhangisa kokuqukethwe kubeka ikhasi lewebhu phakathi kwezinto, futhi umkhiqizo unokulawula lelo khasi lewebhu ngokucacisa izihloko, izihlokwana, namagama angukhiye ahlobene nesikhangiso.
Ukuhlobana Okukhulu - Umcabango oyisisekelo osekela ukukhangisa kokuziphatha ukuthi abasebenzisi bafuna ukubona izikhangiso ezihlobene namathrendi ajwayelekile ekuziphatheni kwabo kokuphequlula. Kodwa-ke, kungenzeka ukuthi izimfuno zabo zamanje zingangeni kulawo mathrendi. Isibonelo, umuntu ophequlula okokusebenza kwezemidlalo angase angafuni ngempela ukubona izikhangiso mayelana nezinsiza ze-graphic design, noma ngabe ngaphambilini uke waphequlula amasevisi edizayini yezithombe. Ngokuphambene, isikhangiso se-organic protein powders singase sihlobane kakhulu nesimo sabo sengqondo samanje futhi sihehe ukuchofoza okwengeziwe.
Ayikho ingozi yobumpumputhe banner - Leyo yinto evamile lapho abasebenzisi befunde khona ukuziba izikhangiso. Isibonelo, isayithi lokubhukha ithikithi lemuvi elinezikhangiso zenkundla yokubuyekezwa kwemuvi yenza umqondo omkhulu kunokuphakela izikhangiso ezihlobene nezinto zokupheka.
Izikhangiso ezihambisana komongo zemikhiqizo engaziwa kangako zikhunjulwa ngo-82% ngaphezulu ngabantu uma kuqhathaniswa nezikhangiso zemikhiqizo edumile kodwa ezingabalulekile kokuqukethwe kwekhasi.
Ngaphezu kwalokho, abantu abaningi abakhululekile ngokukhanyiswa kwezikhangiso ngokusekelwe emsebenzini wabo wangaphambilini wokuphequlula. Kunomqondo ojwayelekile wokugadwa izinkampani ezinkulu ezingavimbela abantu ukuthi bachofoze izikhangiso noma ngabe isikhangiso ngokwaso sibalulekile. Ngakolunye uhlangothi, ukukhangisa kwengqikithi kufanelana nesikhangiso ekhasini lewebhu, okulenza libukeke lingaphansi 'njenge-stalker-like' futhi lithembeke kakhulu ukuthi ungachofoza kulo. Uma abasebenzisi bebona izikhangiso ezifanele, ukubonakala kwezikhangiso kuyakhula, futhi kuyanda amathuba okuba nezinga lokuchofoza eliphezulu.
Ngokuvumelana ne I-Adpushup:
Ukuqondisa kokuqukethwe kulinganiselwe ukwanda kokusebenza ngo-73%. uma kuqhathaniswa nokuqondiswa kokuziphatha.
I-49% yabadayisi base-US sebenzisa ukuqondisa komongo namuhla.
U-31% wemikhiqizo uhlela uku bakhulise imali abayisebenzisayo ekukhangiseni okungokomongo ngonyaka ozayo.
Konke Mayelana “Nengqikithi”
Sengiphetha, bobabili banendima ehlukene okufanele bayidlale esu lokumaketha kwedijithali, futhi izinhlobo ezahlukene zingabanikeza izisindo ezihlukene.
Kodwa kunezikhathi lapho ukukhangisa kokuqukethwe kuyisinqumo esingcono. Isiza amabhrendi aqalise umkhankaso ongadingi izinsiza eziningi ukuze kusetshenziswe kahle. Iphinde iqinisekise ukuthi akudingeki ukuthi basebenzise idatha yomuntu siqu yomsebenzisi noma bakhathazeke ngokuthobela i-GDPR. Bangavele baye ekuqondisweni kwegama elingukhiye esikhundleni salokho.
Ekugcineni, okubalulekile ukwazi ukuthi ufuna ukuthi izikhangiso zakho zifeze ini, ukuthi ufuna ukwenza amakhasimende akho azizwe kanjani ngomkhiqizo wakho, nokuthi uzimisele ukusebenzisa malini kulokho. Bese, yenza ukukhetha kwakho - imiphumela izokhokha ngokuhamba kwesikhathi.
Tags: isigaba sesikhangisoikhukhi yesikhangisoamagama angukhiye wesikhangisoubumfihlo besikhangisoukubaluleka kwesikhangisoi-adpushupukuhlukaniswa kokukhangisaibhena lokungaboniukukhangisa kokuziphathaigama lomkhiqizophequlula umlandoumongoizikhangiso zesimoukukhangisa okuqukethweukukhangisa kokuqukethweizibalo zokukhangisa zokuqukethweukuqina blendergdprizikhangiso ze-geolocationizikhangiso zokuqukethwe kwe-googleizikhangiso ze-googleizikhangiso zekheli le-ipizikhangiso zasendaweniizikhangiso zokucinga
Ukucaca: Amamephu Wokushisa Amahhala kanye Nokurekhodwa Kweseshini Kokuthuthukisa Iwebhusayithi